Voasily Nickel Single Faucet fandroana | Faucets fandroana fandroana fandroana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW Faucets fandroana fandroana fandroana Nickel
Karazana kalitao: This single hole bathroom vanity faucet features brass connectors that are resistant to corrosion and rust. A drip-free ceramic cartridge is built into the faucet, so that it rotates smoothly and seals tightly to ensure long-term use without dripping or leaking.
Solika fandroana efitra fandroana 2321501
Ity fantsona tokana fantsona fandroana fandroana ity dia manolotra fanatsarana fatratra amin'ny fandroanao. Namboarina tamim-pitandremana tamina volom-borona izy io, saingy nisy fihodinana hafahafa ihany. Ny fantsom-baravarana fandroana tokana an'ny WOWOW dia namboarina niaraka tamin'ny tsipika telo, miaraka amina famaranana nikela borosy mahazatra. Tsy ho zava-poana ity paosy tokana fandroana fandroana ity dia eyecatcher ao amin'ny trano fandroana rehetra, ary azo antoka fa ho iray amin'ireo zava-nisongadina tamin'ny haingon-trano fidianao vaovao.
Nasehon'ny fikarohana fa ny faucet ao amin'ny trano fidiovana no loha-laharana voalohany amin'ny trano fandroana. Midika izany fa ny sain'ny tsirairay dia voasarika ho azy amin'ny fantsom-pandroana fandroana. Ny faucet fandroana fandroana angamba dia iray amin'ireo entana madinidinika ao amin'ny haingon-trano fidianao. Ary na izany aza dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahitana ny hakantony. Mazava ho azy, azonao atao ny manisy tendrony kanto amin'ny efitrano fandroana rehetra miaraka amina faucet fandroana iray ao WOWOW. Ny mpamorona WOWOW dia nahatakatra tsara ny fiantraikan'ny faucet ao amin'ny fandroana, ary vokatr'izany dia manamboatra faucet fandroana fandroana izay afaka manisy endrika hafa amin'ny haingo rehetra.
Mamolavola faucet tokana vita amin'ny efitrano fandroana
Tianao ho fomba kanto sy hampiasaina amin'ny fotoana mitovy ny haingon-trano ao amin'ny efitrano fandroana? Vokatr'izany dia mila manapa-kevitra ianao hoe inona ny karazana jaky fandroana izay hofidinao. Raha misy karazana kojakoana isan-jiro, tokony hojerenao aloha ny habaka efa anananao, ary izay tianao kokoa momba ny fifehezana ny mari-pana. Aleonao kosa ny mifehy ny mari-pana ny rano sy ny volume amin'ny sangan'ny 2 na iray monja? Raha tianao fotsiny ny tànana iray, dia mety ho ilay plastika fandroana tsara tarehy izay tadiavinao!
Ity fantsom-baravarankely iray amin'ny efitra fandroana ity dia namboarina avy amin'ny fomba fijery mavitrika sy miasa. Ny famahana kambana tokana dia mipetraka tsara eo anilan'ny sisin'ny trano fandroana. Ny fandroana tokana ao amin'ny efitra fandroana WOWOW dia miasa tsara. Ny fatran'ny rano sy ny mari-pana dia azo fehezina amin'ny tanana tokana. Ny tànana tokana dia tsy misy isalasalana mora ny mitazona sy miasa. Azonao atao fotsiny ny manodina ny fehin'ilay birao fandroana amin'ny tanana iray amin'ny alàlan'ny misintona azy. Amin'ity fomba ity no amboarina ny fikorianan'ny rano. Amin'ny alàlan'ny fihodinana ny famahana tokana dia afaka mampitombo ny hafanana amin'ny rano amin'ny fomba malefaka sy malefaka ianao. Ny fanao miendrika triple-pataloha amerikanina dia tsy manam-paharoa. Izany dia mahatonga ny efitra fandroana ho ambony, avo kokoa, raha mandray soa avy amin'ny asa rehetra izay atolotra anao.
Toeram-pisakafoanana fandroana manara-penitra avo lenta
Ny tantana tokana misy fantsona WOWOW dia vita amin'ny varahina goavambe ary ny famaranana nikela borosy dia nohosorana tanana sy voaravaka. Ho an'ny famaranana azy, WOWOW dia mampiasa ny haitao manara-penitra mba hanomezana kalitao sy faharetana faran'izay betsaka. Satria ny faucet fandroana tokana an'ny WOWOW dia vita amin'ny varahina mafy, ity faucet fandroana vaovao ity dia manome fanoherana tsara ny hamandoana koa noho izany harafesiny. Tsy ho an'ny tsy misy na inona na inona, WOWOW dia manolotra fe-potoana fiantohana 3 taona ho an'ny fantsona tokana faucet ao amin'ny fandroana. Porofo iray fa mino ny kalitaon'ny vokatra WOWOW ary mandray andraikitra amin'ny fahombiazany mandritra ny taona.
Raha tsy manam-paharoa ny famolavolana an'habakabaka faucet tokana ity, dia tsy manam-paharoa ihany koa ny sasany amin'ireo fampiasa azy. Ny maharitra rano famon-tsoavaly ohatra. Ny fahombiazan'ny Neoperl Aerator amin'ny fantsom-piainan'ny rano fandroana ity dia misy fifehezana malefaka sy malefaka. Noho izany dia tsy hiaina famafazana rano ianao. Ankoatra izany dia mitahiry hatramin'ny 50% amin'ny fampiasana rano. Ity dia tena ho voamarikao amin'ny volavolanao ny volanao. Ny aerator dia mora esorina miaraka amin'ny (tafiditra) fitaovana aerator. Amin'izany fomba izany dia afaka manadio azy ireo mora izao ianao sy izao, mba hiantohana ny traikefa tsara indrindra mandritra ny taona maro.
Tazom-baravarankely vaventy azo tanterahina mora
Voalohany indrindra, famaranana nikela voasarona dia manome lamaody tsara amin'ny efitra fandroana rehetra. Ankoatra izany, ny famaranana ny kalitao avo lenta koa dia manohitra ny faritra misy rano, ny malefaka ary ny rantsan-tànana. Noho izany dia mora ampiasaina sy madio. Azonao atao ny mamono moramora fotsiny ny sisa tavela amin'ny lamba manempotra mba hahatonga ny efitra fandroana ho tsara tarehy indray. Mba hanadio ny poketra fandroanao tsy tapaka ary koa fiantohana maharitra. Amin'ity fomba ity, ny sisa tavela dia tsy misy fiovana mifikitra amin'ny faucet mandro. Indrindra, ny sisa tavela toy ny kesika dia mety hisy fiantraikany amin'ny fandroana fandroana, raha tsy voadio tsy tapaka izy io. WOWOW dia manamora izany, mba hahafahanao manao izany tsy misy ezaka.
Ny valizy vita amin'ny seramika amin'ny paosy tokana fandroana fandroana dia manome anao fahombiazana tsy mitete 100%. Ary na izany aza tsy mampihena ny fahamendrehana hiasa. Ity cartridge vita amin'ny seramika avo lenta ity dia notsapaina tamin'ny tsingerina 500,000 10,000 mahery. Ary mbola mitazona fantsom-baravarankely WOWOW tokana ihany no niasa tamina mora foana. Ary mazava ho azy fa mbola mitete-maimaimpoana ary tsy misy famoahana. Alao an-tsaina hoe ny faucet ao amin'ny trano fandroana dia mety tsy hampiasa mihoatra ny XNUMX isan-taona. Midika izany fa amin'ny faucet ao amin'ny fandroana tokana WOWOW dia nividy faucet fandroana mandritra ny androm-piainana ianao. Ity faucet fandroana tokana ity dia mihoatra ny fenitra indostrialy rehetra!
Do-it-anao efitra fandroana faucet tokana
Ny lambam-bolo ho an'ny efitra fandroana dia mora ny mametraka ny tenanao. Tsy mila plumber izay lafo ianao! Noho izany dia afaka mamonjy amin'ny vidin'ny fametrahana be loatra ianao. Ity boaty fandroana ho an'ny tenanao ity dia omena fitaovana feno ary fametrahana fitaovana. Anisan'izany ny takelaka vita amin'ny vy, hose rano Tucai 20 santimetatra misy kalitao azo antoka, fametrahana fonon-tanana, fitaovana fanesorana ahente, sy ny maro hafa.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny WOWOW dia matoky tanteraka ny kalitaon'ny faucets an'ny efitrano fandroana azy. Noho izany, WOWOW dia manolotra fe-potoana fanolorana 3-taona fanampiny. Raha toa ka tsy mandeha tsara toa ny tokony ho izy ny fofom-baravarankely maloto amin'ny fandroana, dia atolotra anao ho marika vaovao fandroana vaovao iray hisolo anao. Ary ankoatr'izay, ny WOWOW dia manome valiny miverina vola 90 andro. Raha tsy ho taitra ianao amin'ny vidin'ny vola WOWOW dia atolotra anao
mahazo refund feno raha tsy misy vidiny fanampiny, ary raha tsy misy fanontaniana apetraka. Tsotra ihany!
Manome wow-factor amin'ny trano fandroana rehetra
SKU: 2321501 Sokajy: Faucets fandroana finday, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: 1 Fehifehy, 1 Tolefo, jiro fandroana
16.2 X 9.1 X 6 santimetatra